Ngatiitei Mari: 8 Nzira dzekushandura Yemagariro Media Traffic Kuita Kutengesa | Martech Zone
Kutengeswa kwesocial media ndicho chishuwo chitsva chenyanzvi dzekushambadzira pasi rese. Kupesana nekutenda kwechinyakare, zvekushambadzira midhiya zvinogona kubatsira kune chero indasitiri - hazvina basa kana vateereri vako vari zviuru zvemazana kana chizvarwa X, vadzidzi vechikoro kana varidzi vemabhizimusi makuru, vanogadzirisa, kana mapurofesa ekoreji. Tichifunga nezve chokwadi chekuti kune nezve 3 bhiriyoni vanoshandisa vezvenhau vashandisi pasirese, unogona here kutaura kuti hapana vanhu vangade kutenga chigadzirwa chako pakati pavo? Basa rako kutsvaga vanhu ava.
Mukuenzanisa nekutengesa kwechinyakare, kushambadzira midhiya yenhau kune zvakawanda zvakanakira - iyi nzira yekutaurirana yakachipa uye inoonekwa seyechokwadi uye yakavimbika, izvo zvinoita kuti ive yakakwana pakutendeuka. Iwe haufanire kutora izwi rangu kwazviri - chingotarisa kuti yakawanda sei makambani ari kushandisa mukushambadzira vezvenhau. Saka unonyatsoshandisa sei vezvenhau kuti uwane purofiti?
Ongorora Yako Maitiro Ekutengesa
Kutsvagisa ndiyo Giraidzo Tsvene yekushambadzira - haugone kutengesa chero chinhu usina kunyatsonzwisisa mashandiro anoita munhu uyo ​​angade kutenga chako chigadzirwa uye anoita sarudzo. Ndicho chikonzero, chekutanga uye chakakosha, iwe unofanirwa kuongorora maitiro ekutengesa kumashure kwako kwekutengesa fanera.
Iyo mibvunzo yaunofanirwa kuzvibvunza iwe kuti uongorore yako yemagariro midhiya yekutengesa mikana ndeiyi:
izvo Channels izvozvi zvirikuunza zvinotungamira kune yako fanera?
Chii maitiro ekutengesa?
Ngani nguva zvinotora kuvhara chibvumirano?
Mhinduro dzemibvunzo iyi dzinogona kukushamisa: pamwe iwe uchaona kuti wanga uchingotarisa pane zvisirizvo mapuratifomu nguva dzese. Mune ino kesi, iwe unogona kuona zvichibatsira kuita katsvagiridzo yakatsaurirwa kusarudza akanakisa enhau enhau pabhizinesi rako.
Unogona kuzviita nekutevera zviitiko zvezvemagariro zvevanokwikwidza uye nekuona mapuratifomu akakosha kwazvo kwavari, asi pane nzira inoshanda zvakanyanya uye yakanakisa yekuzviita. Zvese zvaunoda inguva yekuteerera yekushandisa senge Awario. Nayo unogona kutarisa kutaurwa kwechero rakakosha izwi pasocial media uye webhu munguva chaiyo.
Ngatitii urikugadzira SaaS yekutanga - iwe unongoisa mu "kutanga" seimwe yemazwi ako uye uone kuti ndeapi mapuratifomu ane zvimwe zvinotaurwa uye, nekudaro, hurukuro zhinji dzinoshanda kune chako chigadzirwa. Nenzira iyoyo iwe unozogona kunzwisisa kuti chako chakanangwa nevateereri chiri uye nekuisa pekutanga nzira dzakakodzera.
Ramba uchifunga kuti pane vezvenhau vezvenhau iwe unowanzo svika kune vangangotenga pakutanga mukutengesa: ikozvino nhanho yekuziva mhando yakakamurwa kuita matatu (kufumurwa, simba uye kuita). Izvi zvinoreva kuti iwe unozofanirwa kuumba yako yemagariro midhiya yekutengesa zano maererano.
Wongorora uye Kurudzira ZveMagariro Midhiya Ongororo
Zera rekushambadzira kwetsika kuri kusvika kumagumo - vezvenhau vadzosa nzira inoshanda kwazvo yekukanganisa maitiro emumwe munhu ekutenga. Hameno kuti chii? Ishoko remuromo. Muchokwadi, maererano Nielsen, 92% yevanhu kuvimba kurudziro kubva kushamwari uye mhuri pamusoro pemamwe marudzi ese ekushambadzira, uye 77% yevatengi vane mukana wekutenga chigadzirwa chitsva kana uchidzidza nezvazvo kushamwari kana mhuri. Zviri zvemuzvarirwo kuti iwe unosarudza kuvimba nevanhu vaunoziva pamusoro pechiratidzo.
Zvemagariro midhiya inzvimbo yakakwana yekutumira kwekushambadzira: ese mapuratifomu akagadzirirwa kuti tigovane zviitiko uye zvinoshamisa zvakawanikwa neshamwari dzedu. Saka izvo zvaunofanirwa kuita kuti uwane mari mairi kukurudzira vanhu kutumira nezve zvakaitika kwavari. Iwe unogona kutovapa izvo zvidiki zvinokurudzira, senge diki dhisikaundi kana sampuro.
Usakanganwa kupindura kuongororo dzese, dzakanaka uye dzakaipa zvakafanana. 71% yevatengi avo vakave neruzivo rwemagariro nhepfenyuro yebasa nechiratidzo vangangozvikurudzira kune vamwe. Kushanda kwenzvimbo yemagariro kushamwaridzana kubva padivi reiyo brand kunogadzira hukama pakati peiyo hombe nemutengi uye kunoita kuti vanzwe kunzwikwa, izvo zvakakosha kwazvo mukuchengetedza.
Tora Kutengesa Kwemagariro
Kwete chete kuti vanhu vanofarira kugovera zvavanofunga nezvemhando pasocial media, ivowo vanowanzo tendeukira kumasocial media kuti vawane kurudziro. Ikoko iwe unotova neanogona kutungamira - iwe unongoda kuvaziva. Unogona kuvawana kuburikidza nekutarisa nharaunda dzakakodzera senge Facebook mapoka, subreddits, Twitter chats ect. Iwe unogona zvakare kushandisa yekudyidzana yekuteerera chishandiso icho icho, asi ita shuwa kuti iine chimwe chakadai Boolean yekutsvaga modhi, iyo inobvumidza iwe kugadzirisa yako mibvunzo kuti iwe ugone kuita kuti kutsvaga kwako kuve kwakaringana uye kwakazara panguva imwe chete.
Tichifunga nezve chokwadi chekuti muzviitiko zvakawanda unenge uchipindura kune vausingazive vasina kuratidzwa kune yako brand, tora nguva yako. Usapinda mazviri nekutengesa kusina manzwiro - bvunza mubvunzo, tsanangura kuti vangabatsirike sei kubva kune chigadzirwa chako, shandisa inzwi nezwi rinoenderana nepuratifomu nechikumbiro chavo, uye ita kuti kudyidzana uku kuve nechirevo uye kwechokwadi. Nenzira iyi iwe unonyanya kukanganisa sarudzo yavo pane kutumira cookie-cutter meseji kune yega yega yauchawana. Uye zvechokwadi, ita kuti zvive nyore kwavari kutenga - vape chinongedzo, icho chinotungamira chakananga kuchigadzirwa.
Gadzirira yako Yemagariro Media Nzira kune Shanduko
Kutaura nezvehukama, ivo vakanyanya kukosha. Isu tiri vatengi vane husimbe vanowanzoda kuudzwa kuti vangatenge sei uye kupi chigadzirwa chinodiwa. Kana mutengi angangokwanisa kudzvanya chinongedzo kuwebhusaiti yako ipapo, zvinogoneka kuti havanetse kuzvitsvaga.
Chaunofanirwa kuita kuisa zvinongedzo mune imwe neimwe yemaprofiles ako uye kuita kuti ionekwe. Kana iwe uchitumira chinoshambadzira - isa chinongedzo ipapo, kana iwe uchingotaurawo zvako chimwe chezvigadzirwa zvako - isa chinongedzo ipapo zvakare. Kunyangwe kana uchipindura kune zvinotumirwa, izvo zvatakakurukura kare, unogona kuisa chinongedzo kune chigadzirwa chiri kukurukurwa.
Iwe unofanirwa kugadzira iyo nzira yekutendeuka kuti ive inotsvedza sezvinobvira
Dzokorora Yako Yemagariro Midhiya Kumhara Peji
Paunowana kutungamira, iwe unoda kuve nechokwadi chekuti vangori bhatani kamwe chete kubva pakutendeuka. Zvingave zvinosuwisa kugadzira zvinoshamisa zvemagariro midhiya yekutengesa nzira chete kuti nzira yekutengesa imiswe padanho rekupedzisira. Ndosaka iwe uchida peji rakamhara rekumhara iro rinonyatso gonesa wako anogona mutengi kuti aite yekutenga sarudzo. Hezvino zvinhu zvishoma zvaunoda kuti urambe uchifunga mupfungwa dzako kugadzirisa peji yako yekumhara:
Yekumhanyisa kumhanya. Vatengi havangove nungo chete, ivo zvakare havashiviriri (ndine hurombo, vatengi!). Ivo vari kutarisira kuti peji rako ripinze mukati 3 masekondi, nepo avhareji yekurodha nguva i15 Saka ita shuwa kuti havafanirwe kumirira!
Muchidimbu uye nyore. Iko hakuna kudikanwa kwekutara yega yega chikonzero chekuti nei chigadzirwa chako chiri chakanakisa mune yega yega tsananguro Iwe haudi kukanganisa wako anogona mutengi neruzivo rwese rwakawedzerwa ruzivo. Ita kuti meseji idzorere kukosha kwako ive yakapfava uye yakachena woisa rumwe ruzivo mune akapatsanuka nyore-ekuona-tabo - ndizvozvo.
Zvakare, kuvimbika uye kuendeswa Kuti upedze kushandurwa iwe unoda kuvimba kwevatengi. Kuvimbika kwakakosha zvakanyanya pasarudzo yemutengi. Ita shuwa kuti une logo yako kana mutengi chipupuriro paziso reziso mune imwe yemahara kana mumusoro - kumwe kunhu kwavanogona kukurumidza kuzviona vasina kupuruzira.
Ita Shanduko Yakapfava
Sezvatakambokurukura, social media inotungamira inopinda mukutengesa funnel kare kupfuura echinyakare zvinotungamira. Nokuda kwechikonzero ichocho, vangave vasina kugadzirira kuita chisarudzo chekutenga, asi izvozvo hazvirevi kuti iwe unogona kuvaregeredza.
Pano iwe unogona kugadzira mikana yeiyo yakapfava kutendeuka. Nzira yechinyakare yekuzviita ndeyekupa kunyoreswa kweemail. Ehezve, iwe unofanirwa kupembedza izvi kune vatengi nekuvapa ivo zvinonakidza uye zvakakosha zvemukati. Kugadzira zvemukati zvinoratidzira zvinoratidza kuti chigadzirwa chako chinoshanda sei (tutorials uye nyaya dzenyaya) inzira yakanaka yekushandura aya manyoro anotungamira kuvavanogona kutenga.
Chimiro chitsva chiri kubuda izvozvi chiri messenger kushambadzira, saka, panzvimbo yekukumbira vanhu kuti vanyore kune tsamba yako, unogona kungokumbira mvumo yekuvatumira mameseji. Zvave zvichiratidzwa kuti vanhu vanowanzo verenga meseji pane vezvenhau pane email. Zvidzidzo zvinoratidza kuti mameseji maapplication ane akavhurika mitengo, verenga mareti uye maCTRs zvakanyanya se10X iwo emaimeri neSMS. Uyezve, iwe unovasvikira iko chaiko kwavakatanga kusangana nechako chiratidzo - pasocial media.
Sanganisira Yakasimba Kudana-Ku-Chiito
Kana iwe usingabvunze chero chinhu - hapana chaunowana. Kunyangwe dzimwe nguva zvichiratidzika senge kushevedzwa-kuita-chiito kunogona kunge kuchimanikidza, inzira inoshanda kwazvo kana uchizviita nemazvo.
CTA yako inofanirwa kuve yakajeka uye inoenderana nepositi - nenzira iyi ichaita senge yakasikwa uye yakakodzera. Inogona kunge iri yekukoka kuti usiye chirevo uye ugovane zvavanofunga, dzidza zvakawanda pamusoro wenyaya, kana kurudziro yekutenga chigadzirwa chako. Kuwedzera maCTA kune yako Facebook peji kunogona kuwedzera iyo tinya-kuburikidza chiyero ne285%. Usakanganwa kuve nechokwadi chekuti kana iwe ukasanganisira chero chinongedzo, ako ekumhara mapeji akagadziridzwa kuti achinje kutendeuka.
Govera Zvemagariro Zvese
Mushure mezvose, nzira yakanakisa yekuwana vatengi vatsva ndeyekupa chimwe chinhu chakasarudzika mukudzoka - vanhu vanofarira kunzwa sekunge ivo chikamu cheboka rakasarudzwa. Nzira iri pachena yekuita izvi ndeyekupa zvidzikiso kune vateveri vako - haugone kuzviita kazhinji, asi sechibvumirano chenguva imwe chete kukwezva mitsva inotungamira, inoshanda mashiripiti.
Imwe nzira yekugadzira (uye isingadhuri) ingave yekuita makwikwi pakati pevateveri vako. Semuyenzaniso, NdebvuBrand yakakwanisa kukura huvepo hwayo hwemagariro ne300% uye yakapetwa kaviri runyorwa rweemail mukati meisingasviki svondo rimwe nemakwikwi akanyatsofungwa epamhepo. Unogona kukumbira vateveri vako kuti vagovane uye vadzokerezve zvawatumira kana kugadzira zvavo zvemukati nechigadzirwa chako kana sevhisi mairi. Uri kuuraya shiri mbiri nedombo rimwe - kuwedzera kuratidzwa uye vateveri pamwe nekuunganidza-zvinogadzirwa nemushandisi zvaunogona kushandisa mukutengesa kwako kwesocial media uye kushambadzira kwechinyakare kushambadzira mune ramangwana.
Tags: ndebvuboolean kutsvagaboolean yekutsvaga modhinzira yekutendeukaMapoka e Facebookbatanidza mubatsirimessenger kushambadziramarikutaura kwevanhuevanhu vezvenhausocial media kumhara pejiyemagariro midhiya nzira kutendeukazvemagariro midhiya maripasocial media kutengesakutengesa munharaundakutendeuka kwakapfavasubredditstwitter hurukuro
Sitelock: Dzivirira Yako WordPress Webhusaiti uye Vashanyi
Hypernet: Tinya Mukati meLentent Yakatemerwa Simba reComputer kana Tengesa Yako